စာပို့ | October 2019
E-mail ဖြင့်ပေးပို့အက္ခရာများအတွက်လက်မှတ်, အမည်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုမသာထွက်ခွာ, သင်စနစ်တကျလက်ခံသူမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပြုထားသည်။ သင်သည်မည်သည့်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု၏စံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးနိုငျတဲ့ဒီဇိုင်းဒြပ်စင်ကိုဖန်တီးပါ။ Next ကိုကျနော်တို့မက်ဆေ့ခ်ျမှလက်မှတ်ပေါင်းထည့်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြရန်။
အတော်လေးမကြာခဏအင်တာနက်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူများသည်အတွက်အများအပြားအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း၏အဆင်မပြေအတူပြဿနာတစ်ခုရှိသေး၏။ ရလဒ်အဖြစ်မသက်ဆိုင်သယံဇာတများ၏တယောက်ကိုတယောက် e-mail, box ကို binding အမှန်တကယ်ခေါင်းစဉ်အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းမရှိ။ တယောက်ကိုတယောက်လိပ်စာ SNAP န်ဆောင်မှုမေးလ်မှအတော်ကြာအီလက်ထရောနစ်စာတိုက်ပုံးများချိတ်ဆက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုက e-mail ကိုကနေတဆင့်ဓာတ်ပုံကိုပို့
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ, မသက်ဆိုင်လှုပ်ရှားမှု၏ဒီဂရီ၏မကြာခဏဓာတ်ပုံများအပါအဝင်မည်သည့်မီဒီယာဖိုင်များ, ကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်။ စည်းကမ်းအဖြစ်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, ဿုံမဆိုလူကြိုက်အများဆုံးအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု fit မကြာခဏတခြားအလားတူသယံဇာတများမှအနည်းဆုံးကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းနှင့်အတူ iSloud မေးလ်သှားဖို့ကိုဘယ်လို
မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကို Apple ရဲ့ iCloud သင်သည်အလျင်အမြန်, အလွယ်တကူနှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးအကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သော် user ကအီးမေးလ်များ, စေလွှတ်မည်ခံယူခြင်းနှင့်စုစည်းနိုင်ပါလိမ့်မည်မီ, သငျသညျကို iOS ပေါ်မှာလည်ပတ် device ကိုဒါမှမဟုတ် Mac ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ icloud.com @ အီးမေးလ်လိပ်စာ configure ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
E-mail ကို protocol ကိုကဘာလဲ
လူအတော်များများမေး, တဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားမေးလ် client ကို configure ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူကွုံရသောအခါ: "။ အဘယျသို့ e-mail ကို protocol တစ်ခုဖြစ်သည်" အမှန်မှာ "အင်အား" သာမန်အားဖြင့်တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်, ပြီးတော့အငြိမ့်ကရွေးချယ်ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာအရာ, နားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်တယ်, ဘယ်လိုအရာကြွင်းလေထဲကနေကွဲပြားခြားနားသည်ကိုအသုံးပွုဖို့ program တစ်ခုနိုင်ရန်အတွက်။
E-mail, စာလုံး၏လက်မှတသင်လက်ခံရရှိသူတစ်ဦးအပိုဆောင်းအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုပေးဖို့လိုတဲ့အခါအသုံးပြုအလွန်သိကောင်းစရာများ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ရပါမည်။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာကျနော်တို့အနည်းငယ်ဖော်ပြထားတာဥပမာအတူဒီဇိုင်းလက်မှတ်ပေါင်းအပေါငျးတို့သအရေးကြီးဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
E-mail, ကနေတဆင့်ပေးပို့ဖို့ Archive ဖိုင်ကို
အတော်များများကအသုံးပြုသူများက e-mail, ကနေတစ်ဆင့်ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေပို့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည်။ အတော်ကြာဖိုင်တွေရှိပါတယ်လျှင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအချိန်အများကြီးကြာ, နှင့် - တစ်ဦးတာဝန်မကြာခဏမဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာသည်။ စာအကြောင်းအရာပူးတွဲခံရဖို့အလေးချိန်လျှော့ချရန်နည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးသုံးပြီးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်လိပ်စာနဲ့လက်ခံသူပေးပို့ခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။
အသုံးပြုသူအများစုသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသောက e-mail ဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မသက်ဆိုင်အသက်အမျိုးအစား။ ထိုကြောင့်, မေးလ်၏မှန်ကန်သောကိုင်တွယ်အင်တာနက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအဘို့ရှင်းလင်းစွာလိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူအဘယ်သူကိုမျှအဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ e-mail အရေးအသား၏ဖြစ်စဉ်ကိုပေးပို့ခြင်း, ပြီးတော့မဆိုအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူကိုဖတ်ရှုဖို့လိုပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုက e-mail ဖြင့်ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါကိုပေးပို့ဖို့
အချို့သောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်သင်စာတိုက်န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်မည်သည့်ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်တွဲပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသင်ယူဖို့, ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းထပ်မံရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ e-mail, လဲလှယ်မှုအတွက်န်ဆောင်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးမှတဆင့်အချက်အလက်များ၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများလွှဲပြောင်းမဟုတ်ဘဲမှဖော်ပြထားခြင်းဒီအခွင့်အလမ်းသင့်လျော်သောအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုသယံဇာတအပေါ်စာသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပျေါမှာ e-mail, တို့ထိဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲပို့ပါ။
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်တည်ရှိနေမယ့်စမ်းသပ်မှုအီးမေးလ်လိပ်စာအဖြစ်အခွင့်အလမ်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အဲဒီမှာဤသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လိုပေါ် options အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကို 100% အာမခံချက်တိကျမှန်ကန်မှုသူတို့ကိုမဆိုမဖြစ်နိုင်ပါ။ အခန်းထဲရောက်တော့မကြာခဏအီးမေးလ်တည်ရှိမှုစစ်ဆေးနေ၏နည်းလမ်းများ, အီးမေးလ်စစ်ဆေးနေအသုံးပြုသူသူ့ကိုယူချင်ပါတယ်သောနာမတျောကိုရှာတွေ့နိုင်ရန်အတွက်ထွက်ယူသွားတတ်၏။
E-mail, SMS ကို-မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိ
ကြောင့်အသက်တာ၏ခေတ်သစ်အရှိန်အဟုန်အားလုံးကိုအသုံးပြုသူများသည်တခါတရံအလွန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည့်အီလက်ထရွန်းနစ်စာတိုက်ပုံး, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်အဖြစ်များစွာသောအခြားအညီအမျှအရေးပေါ်ပြဿနာများအတွက်, သင် SMS ကို-သတင်းအချက်အလက်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်မှချိတ်ဆက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
စာပို့စာရင်းများသတင်းက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များရှိမရှိ, စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်အတူနီးပါးတိုင်း site ကိုရှိသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုအရေးအသားဒီလိုမျိုးကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသည်နှင့်သင် folder ကို "ပမ်" သို့အလိုအလျှောက်လဲကြဘူးလျှင်အီလက်ထရောနစ် box ရဲ့ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ပါ။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြိုက်များ e-mail, န်ဆောင်မှုများပေးရန်ဖြန့်ဝေဖယ်ရှားပစ်ရရန်မည်သို့အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
အီးမေးလ်ဖြင့် password recovery
အီးမေးလ်ပို့ရန်လူတိုင်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများမကြာခဏကွဲပြားခြားနားသောဝဘ်န်ဆောင်မှုအပေါ်မျိုးစုံသေတ္တာများရှိသည်။ ဒါဟာမကြာခဏသတိမမူသူတို့ထဲကအတော်များများမှတ်ပုံတင် password ကိုအတူ created, ပြီးတော့သူက restore ရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့မဟုတ်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးမျိုးသောန်ဆောင်မှုသို့ပွနျလညျထူထောငျ codewords ၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်စာတိုက်ပုံး၏စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်။
E-mail, တစ်မူဘောင် Creating
ခေတ်သစ်အင်တာနက်သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီကိုမှန်မှန်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာအက္ခရာများအားလက်ခံတွေ့ဆုံသောအီလက်ထရောနစ်စာတိုက်ပုံး၏ပိုင်ရှင်သည်။ တခါတရံသူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကြှနျုပျတို့သညျဤ manual ၏သင်တန်းတွင်ဆွေးနွေးရန်င့်ကိုထည့်သွင်းဖို့မူဘောင်များကိုအသုံးပြုသည်။ ရက်စွဲကိုရန်အက္ခရာများများအတွက်မူဘောင် Creating နီးပါးမည်သည့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်လုပ်တဲ့အသုံးအနှုန်းများအတွက်အတော်လေးကန့်သတ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သည်သိသာထင်ရှားသောကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းအရာပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, အထူးစာအိတ်မျှမျှတတစံဒီဇိုင်းကိုဝယ်ယူရန်နှင့်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်မှအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ဖို့။ သို့သျောလညျးသငျသညျတစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာပို့တစ်ချိန်တည်းမှာအရေးပါမှုကိုအလေးပေးပြောကြားဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့စာအိတ်ဖန်တီးအရှိဆုံးလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုအစီအစဉ်၏အချို့ကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအကြားနှင့်အထူးသဖြင့်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် e-mail လိပ်စာနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဘယ်တော့မှခဲ့သောအသစ်ရောက်ရှိလာသော၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းကိုတင်ပြ။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်ကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်တွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်ဤဆောင်းပါး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြစ်အောက်ပိုင်း၏ဤအင်္ဂါရပ်အပေါ်အခြေခံပြီးအလုံအလောက်ခေါင်းစဉ်နည်းလမ်းများဖြစ်လိမ့်မည်။
Mozilla Thunderbird ရဲ့တစ်ဦး template ကိုစာတစ်စောင် Create
ယနေ့အထိ, Mozilla Thunderbird ရဲ့ PC အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအီးမေးလ်ကဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ် built-in ကာကွယ်မှု module ကိုကျေးဇူးတင်အသုံးပြုသူရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန်အဖြစ်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုကြောင့်အီးမေးလ်ကအတူအလုပ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ Download ကို Mozilla Thunderbird ကို tool ကို, သို့သော်, အချို့သောအသုံးဝင်သော features တွေပါသေးဤနေရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့် multiakkauntnosti နှင့်မန်နေဂျာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သက်ဆိုင်ရာ features တွေတစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်ကပျောက်ဆုံးနေခဲ့သည်။
ယနေ့အထိ, အင်တာနက်မေးလ် ပို. ပို. ရိုးရှင်းဆက်သွယ်ရေးဘို့ထက်မေးလ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။ ထိုကြောင့်နီးပါးမည်သည့်မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ standard interface ကိုထက်အများကြီးပို features တွေပေး HTML ကို-တင်းပလိတ်များအတွက်အမှန်တကယ်ခေါင်းစဉ်ရှိသေး၏။ ဤဆောင်းပါး၌ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အခွင့်အလမ်းများကိုအများဆုံးအသုံးပြုသူ-friendly ကို web အရင်းအမြစ်များနှင့်ဒက်စ်တော့ပလီကေးရှင်းအချို့ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ domain မှမေးလ်အောင်လုပ်နည်း
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် domain များ၏အတော်များများကပိုင်ရှင်တွေသိချင်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး site ၏အသုံးပြုသူများထံမှ၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး mail နဲ့စာလုံးကိုတွေ့မြင်လိုတဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောအီလက်ထရောနစ်သေတ္တာများထံသို့လာကြပါပြီ။ ဒီအလုနီးပါးတိုင်းလူသိများမေးလ်န်ဆောင်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်သင်ပြီးသားအပြည့်အဝက်ဘ်ဆိုဒ်လေကစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိကြပါပြီသာလျှင်။
အခုတော့အများအပြားအသုံးပြုသူများတက်ကြွစွာ e-mail, ကိုအသုံးပြုပါ။ သူတို့ကအလုပ်, ဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များအတွက်မှတ်ပုံတင်မှတဆင့်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာသင်က e-mail ကိုရတယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အရေးမပါဘူး, ရံဖန်ရံခါအရေးကြီးသောမက်ဆေ့ခ်ျများနေတုန်းပဲရှိသေး၏။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံရရှိမှုနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသေး၏။